IINDIDI ZAMACHIBI OKUGQIBA (ISIKHOKELO SOYILO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Iindidi zamachibi okuGqiba (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sethu kwiindidi zokugqitywa kwamachibi kubandakanya udaka, iithayile, ukuhlanganiswa okuhlanganisiweyo, ilitye kunye nekhonkrithi. Ukugqitywa kunokukwenza okanye ukwaphule imo yonke kunye nokubonakala kwedama lakho lokuqubha. Nje ukuba uthathe isigqibo sobungakanani, imilo, kunye nesimbo sedama lakho - inyathelo elilandelayo lokuthatha izixhobo kunye nokugqitywa.
Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ichibi lokuqubha lihlala ixesha elide kunokuba bekulindelwe- kwaye lonke eli xesha lixhomekeke kwizithuthi ezininzi, iklorini, amanzi, kunye nokunxiba ngokubanzi kunye neenyembezi.
Yiyo loo nto, ukukhetha ngobulumko ukugqitywa okunikezela ngobuhle be-aesthetics kunye nokuphila ixesha elide kunye nokuhlala ixesha elide kubalulekile.
Zeziphi iindidi ezahlukeneyo zamachibi ezigqityiweyo?
Imithunzi emnyama yoPlasta
Ukuboniswa kwePhuli yokuHlanganisa egqityiweyo
Ipuli edibeneyo yokuCoca iphelile
Iphuli yePhuli igqibile
I-Ceramic kunye ne-Porcelain Pool Tile
Leliphi elona Damu lihlala ixesha elide?
Yeyiphi eyona Ndawo yokuPhucula iPhuli yePhuli?
Yintoni eyona ndawo ingcono yePhuli yokuqubha?
Kukho uluhlu olubanzi lwezinto zokubhukuda kunye namathuba okugqiba afumanekayo kwimarike. Ukukhetha ukugqitywa kwamachibi akuyi kuphelisa kuphela ukuvuza kwamanzi kodwa kuya kunika ixesha elide kunye nokubonakala okungabonakaliyo, kunye nokubonakala kwe-echibini.
Inene, ezi zigqibileyo zezona zichaza imeko yemeko kunye nobuhle bendawo yakho yangaphandle. Ke, makhe sixoxe ngeentlobo eziphambili zokugqitywa okufumanekayo kunye neepropathi zabo, ubuchule kunye nobubi.
Ukugqitywa kwe-Plaster mhlawumbi yenye yezona zinto zidala ezidibanisa umxube wesamente emhlophe kunye nemarble etyunyuziweyo yokudala ukugqitywa kwephuli.
Ukuba sesinye sezona zigqibelo zifikelelekayo nezinexabiso eliphantsi ezifumanekayo kwimarike, ukugqitywa kwephuli yokudada kufuna ulondolozo oluninzi kwaye inobomi obufutshane obufutshane malunga neminyaka esi-7 ukuya kweli-10. Njengamaxesha okugqiba kunye nokutsalwa kunokuqwalaselwa kakuhle.
Ukugqitywa kokutyabeka kunokuphinda kudweliswe ngokweendidi ezimbini: umgangatho kunye nemibala.
Apha, udaka oluqhelekileyo luhlala lumhlophe okanye umbala okhanyayo ongwevu ngombala ogqibeleleyo.
Ke, ukuba ujonge ukufikelela kubume bendalo ngombala wamanzi obonakalisayo, oku kunokuba yinto oyithandayo. Ngapha koko, olu khetho lubiza ixabiso eliphantsi kwaye lusezantsi ukugcina.
Kwelinye icala, imisebenzi yeplasta enemibala efanayo nomgangatho kodwa inombala omnyama kancinane (inokuba ngwevu okanye luhlaza) enika inkangeleko yendalo kunye neye-organic echibini.
La madanyana anombala ngokuqinisekileyo abonakalisa ukubonakala okumangalisayo okunika la madanyana amandla anomdla wokujonga. Ezinye zale mimnyama emnyama ikwafuna ukongeza ubunzulu kwimbonakalo yeephuli ezikhoyo.
Ukwenza iphalethi eyahlukileyo ngaphandle, unokongeza umbala oyifunayo kule plasta. Ukubonisa uvakalelo olufanelekileyo lwalagoon-oluvakalayo, olu khetho luyacetyiswa ngokuqinisekileyo ukuba ukhetha kakhulu i-aesthetics kunye nendawo yokudibana.
Owona mbala uthandwayo wokugqiba iphuli ungwevu ophakathi. Lo mthunzi unika amanzi echibi umthunzi oluhlaza okwesibhakabhaka onomdla kubanini bamakhaya.
Ukongeza iimpawu ezibonakalayo echibini, imibala emnyama ingasetyenziswa njengombala omnyama okanye mnyama. Ukutyabeka umbala ngokukhanyayo kunokudala iphuli yombala oluhlaza kunye nemibala emnyama yeplasta inikezela ngokwahluka okungaphezulu kohlaza. Bona eminye imifanekiso uyilo lwamachibi okudada Apha.
Ukugqitywa kokudityaniswa ngokubanzi kufuna ukudityaniswa kwesamente esekwe kumbala kunye nezinto ezivela ngokwendalo ezinjengeekristali, amatye kunye namatye. Ngokuchasene noko, le typology inyukile ngokweemfuno phakathi kwabanini bamakhaya kunye nabakhi.
Yiyo loo nto, ukuphucula indawo yokudada yokudada, ukugqitywa kokuhlanganiswa ngokuqinisekileyo kuya kuba sesinye sezona zigqibeleleyo zithandwayo. Ngokuqhelekileyo zigcinwa ziphantsi kwaye zibonelela ngobomi obugqithisileyo xa zihlala zinakekelwa. Nangona kunjalo, zinokubiza kakhulu kwaye zinokufuna ukuvuselelwa yonke iminyaka eli-10 ukuya kwengama-20 njengoko kufuneka njalo.
Ke, zimbini iintlobo eziphambili zamachibi agqityiweyo echibini-aveziweyo kwaye apolishiwe. Makhe sixoxe ngokuba bobabini banokunikela ngantoni.
Oku kugqitywa kubandakanya ukutyabeka kugqitywe xa kuxutywe nomndilili oqhelekileyo. Ngokuyintloko, umndilili oqhelekileyo usebenzisa ikhonkrithi njengenye yezona zinto ziphambili ngelixa uxubusha iingqalutye ngqo kumxube.
Isiphumo sisicatshulwa esicocekileyo esinokuziva sirhabaxa xa sihamba ngaphezulu. Yiyo loo nto, kuxhomekeke kwiimfuno zakho-oku kunokuba okanye kungangabi yintsikelelo kuwe.
Ngaphandle kokungahambi kakuhle, oku kugqitywa ngokuqinisekileyo kubonisa ukubonakala kwendalo kunye nezinto eziphilayo echibini. Ikwadala ukumelana okungcono kwesiliphu okufunwayo kwimimandla yeephuli.
Xa uthetha ngokuzinza kunye namandla, olu khetho lubonisa ukuba lungcono kunokutyabeka okungacacanga kwaye ngandlel 'ithile lincinci kunezihlanganisi ezipholileyo. Funda ngakumbi malunga kutyhilwa kumgangatho weephuli zamachibi Apha.
Kwelinye icala, izinto ezidityanisiweyo zibandakanya amatye ombala acocekileyo anje nge-marble, i-granite kunye ne-quartz.
Nje ukuba lo mxube usetyenziswe ngezandla ngaphezulu kwedama, umphumo uya kuthi ke ukhazimliswe ukwenza indawo egudileyo kunye nebengezelayo.
Amagugu kulo mxube wokuxuba akaneli nje ukubonakalisa ubuhle kodwa ayanceda ukugcina izinto kunye nokwandisa ixesha lokuphila lokugqiba. Ukufaka esi siphelo sokuhombisa kuya kuqinisekisa ukongezwa kobomi beminyaka eyi-12 ukuya kwengama-20.
Kulolu hlobo, kukho indibaniselwano yeentsimbi zeglasi ezincinci ezinamatye amancinci omlambo. Ukugqitywa kokugqitywa kwamandla kuhlanjwe ngamandla kusetyenziswa i-muriatic acid enamandla ngamanzi ukuze ibonakalise ubuhlalu beglasi kunye namatye emilambo abonakalayo.
Enye yezona ndawo zidume kakhulu zethayile esekwe echibini iquka i-porcelain okanye i-ceramic eneglasi okanye ilitye. Olu hlobo lolunye lwezona zinto zintle kakhulu, luhlala ixesha elide, lomelele, kwaye lukhetha ixesha elide.
Xa kuthelekiswa nodaka kunye nokugqitywa komndilili, iithayile zithatha inkqubo yokufaka kunye nexesha elide. Yiyo loo nto, kwimeko apho kukho nawuphi na umonakalo okanye ngokubanzi ukuba ithayile ifuna ukutshintshwa, umsebenzi obonakalayo unokwenziwa ngokukhawuleza.
Kuxhomekeka kubungakanani kunye nohlobo lwethayile yakho, indleko zinokwahluka ngeedola ezingama-50 ngeenyawo zesikwere. Nangona kunjalo, kufuneka uzikhathalele ezi tile kwaye uzigcine rhoqo njengoko zinokuphela zikhutshiwe kwaye zonakaliswe ekuhambeni kweminyaka.
Ngapha koko, ezi tile zivela kubukhulu obahlukeneyo-ubukhulu becala, ukusuka ku-1-, 2-, 3-, okanye isikwere-intshi ezi-6 ezivumela ukudala imifanekiso eqengqelekayo kumphezulu wechibi. Ukongeza koku, iithayile zinamandla okwenza iziqwenga ezizodwa ezihlala ixesha elide kunokuba bekulindelwe.
Kwelinye icala, ezinye zezinto ezingeloncedo zibandakanya amaxabiso abizayo, inkqubo enzima yokufaka, kunye nokuchaphazeleka kocalcium ngaphezulu. Makhe sixoxe ngeentlobo ezintathu eziphambili zeethayile ezifumaneka kwimarike ziiCeramic, porcelain, kunye namatye.
Iithayile zeCeramic kunye ne-porcelain yenye yezona zinto zithandwayo zigqityiweyo. Ungayishiya ityhilekile okanye usebenzise ukhetho olugudisiweyo ukongeza uphawu olungqongqo ngaphezulu kwamachibi akho.
Inkangeleko yomelele kwaye ekumgangatho ophezulu ibonisa ukubonakala okugqibeleleyo kwedrama kunye nobunzulu kwiindawo zakho zangaphandle. Unokuqhubeka nokukhetha ukugqitywa kombhalo kwinto yokubamba isiliphu.
Iithayile ziza kuluhlu olubanzi lobungakanani, iimilo, imibala, kunye nezitayile. Iithayile zinceda ekubonakaliseni ukukhanya okuphuma echibini lokudala ukubonakala okuguqukayo ngelixa ukongeza umaleko wokhuseleko olungangenwa ngamanzi.
Kwelinye icala, iithayile ezingagqitywanga zakha inkangeleko yendalo kunye neye-organic ngokudibeneyo yokuhlangana kunye nomhlaba okufuphi.
Iitayile zamatye ichibi lokuqubha elinamanzi kwaye Umgangatho wamachibi endalo iyadi.
Njengemabhile, igranite, isileyiti kunye nelitye lekalika, ezi tayile zikhangeleka zendalo zinceda ukudibanisa iphuli nendawo ezingqongileyo ezikufutshane. Ngokukodwa ukuba unesimanje, ubuncinci, kunye nesitayile sangoku yoyilo lwangaphandle, oku kugqitywa kuyicherry ephezulu.
Oku kugqitywa ngokubanzi kubandakanya ukudityaniswa kweengqalutye ezinobungakanani obuqhelekileyo kunye neziqwengana ezincinci zamatye. Xa kuthelekiswa neetiles zeceramic kunye ne-porcelain, ezi zinoburhabaxa kunye nokuziva.
Ke, ukuba uzama ukufezekisa ukujonga kwendalo kunye nokungaqondakaliyo, le tile yelitye inokuba yeyona ndlela ilungileyo echibini lakho. Imibala efumanekayo yimibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza, nengwevu (kunokuba ngaphezulu kuxhomekeke kumboneleli kunye nomvelisi).
Ukugqitywa kwethayile lelona lide lihlala ixesha elide liphelile. Zomelele, zomelele, kwaye zomelele kakhulu-yiyo loo nto, ezi kufuneka zisetyenziswe ngokuqinisekileyo ukuba ufuna ukufumana ubomi obude okanye usebenzisa iphuli kwiindawo ezigcwele abantu okanye nayiphi na enye injongo ngaphandle kwendawo yokuhlala.
Ngokubanzi, iithayile azidingi kulondolozwa kwaye unokuzisebenzisa ngokulula iminyaka kunye neminyaka. Ngenxa yoko, azifuni kutshintshwa. Nangona zibiza kakhulu kumanqanaba okuqala, kodwa ukuba ziyajongwa ekuhambeni kwexesha, zikongela imali kunye nexesha, zombini.
Ukuba iphuli yakho yokubhukuda ibonisa iimpawu zokunxiba, ukukrazuka, kunye nokuqaqamba, lixesha lokuba uqwalasele ukuphinda ubuye echibini. Kukho izinto ezintathu ezithandwayo ezisetyenziselwa ukuvusa amadama okubhukuda-ingqalutye, ikhonkrithi kunye nodaka. Makhe sixoxe ngokuba ngamnye kubo unikele ntoni.
Umxube wodaka kunye namatye eengqalutye, olu lukhetho lokugqibela nolunganyangekiyo kumabala. Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo kunye nezitayile, inkangeleko kunye nokuthungwa ngokuqinisekileyo kuya kubonakalisa imvakalelo yendalo kunye ne-rustic.
Enye yezona zithandwa kwaye zinexabiso eliphantsi, udaka olumhlophe lunokusetyenziselwa ukuphinda ulwenze lula echibini. Nangona kunjalo, azomelelanga njengabanye-ubukhulu becala, zikhutshwa ngokulula kwaye zifuna ulondolozo rhoqo kunye nokuvela kwakhona kwisithuba sexesha.
Ukunikezela ngeenzuzo ezinje nge-aesthetics, ukuhlala ixesha elide, ukomelela, kunye nokuphila ixesha elide, ikhonkrithi yenye yezona zinto zibalulekileyo zokuphinda ubuye echibini. Kulula ukulungisa iintanda kule meko ngelixa ufaka phantse nawuphi na umbala kuyo.
Umphezulu obalaseleyo wedama lokudada yikhonkrithi. Inzima, yomelele, yomelele, kwaye inika okona kuxhathisa kukonakala kunye nokukrazuka.
Ungakudibanisa oku kwiindawo eziphezulu zezithuthi phantse ulondolozo oluncinci. Yiyo loo nto ukwenza olona khetho lubalaseleyo lokujonga ngaphezulu kunye nokubekwa kwakhona.
Ukubona uninzi lwezi zigqibeleleyo kunye nokukhetha ungasebenzisa enye ekhoyo Isoftware yoyilo lokuqubha iinkqubo. Ezi nkqubo zivumela umntu ukuba enze eyakhe indawo yokubhukuda kwaye azame imibala eyahlukeneyo kwaye agqibe ukubona ukuba loluphi uhlobo oluthandayo.
eyona ndawo yokuhlala iiholide kubandakanyo
ubhala njani umsitho womtshato
Isipho seminyaka eli-10 sokukhumbula umyeni
Kutheni oomolokazana benxibe isigqubuthelo
ibhedi entle yamantombazana